Gbasara Anyị | Xuzhou Jiamei Glass Products Co., Ltd.
Xuzhou Jiamei Glass Products Co., Ltd. bụ a mmepụta enterprise ọkachamara na nkwakọ nke ntecha nkwakọ ihe n'ụlọ na mba ọzọ, na nke dị mkpa mmanụ na ntecha nkwakọ n'ụlọ na mba ọzọ. Ọ kachasị na-ere ma na-ere karama mmanụ, karama mmanụ dị mkpa, karama aromatherapy, karama ude mmiri, wdg.
Isi ngwaahịa bụ: karama mmanụ dị mkpa, karama mmanụ na-acha anụnụ anụnụ, karama mmanụ dị mkpa, mkpa karama mmanụ, karama mmanụ dị mkpa, karama mmanụ dị mkpa, karama Xilin na ngwaahịa ndị ọzọ.
Mmekọrịta mmepụta nke dị mkpa mmanụ karama plastic okpu + n'ime nkwụnye, mkpa mmanụ karama anodized aluminum okpu, mkpa mmanụ karama anodized aluminum mgbochi-ezu ohi okpu, mkpa mmanụ karama plastic isi iko dropper, mkpa mmanụ karama nnukwu isi okpu, bakelite okpu, wdg
Okpu karama mmanụ dị mkpa nke ejiri ọtụtụ ọrụ rụọ nwere ike ijide akara akachasị mma na nkwụsị nke corrosion, hụ na 100% mmanụ dị mkpa adịghị agbapụ, ọ gaghị ewepụ ma gbawaa.
Tọrọ ntọala Na
E guzobere ụlọ ọrụ anyị na 2016.
CE, ANSI, SGS na ISO 9001 akwụkwọ.
Nye ọnụahịa na ọrụ kacha mma
Ọkachamara, arụmọrụ dị elu, ezigbo ndị ọrụ ọrụ.
Okpu na ntanye ntanye nwere ike inye otutu uzo di iche iche di iche iche iji zute uzo di iche iche di nkpa.
The mkpa mmanụ karama usoro ngwaahịa na-emepụta site na-ewebata elu akpaka iko akpụ igwe. The ngwaahịa mma bụ ike, ikike ndiiche bụ obere, ịdị ọcha bụ elu, kalama mgbidi ọkpụrụkpụ na agba ndị edo, na mmetụta ike dị elu.
Ahịrị ndị ahụ dị mma ma na-adị mgbe niile, ike nrụgide dị n'ime ya dịkwa elu. A na-eji ngwaahịa ahụ maka nkwakọ ngwaahịa kemịkalụ dị ka mmanu mmanu dị mkpa, ihe mgbakwunye nri, ndị na-ahụ maka ọgwụ, na ndị na-emegharị kemịkal.
Iguzosi ike n'ezi ihe, ike na ogo ngwaahịa nke Xuzhou Jiamei Packaging Products Co., Ltd. ka ụlọ ọrụ ahụ ghọtara. A na-anabata ndị enyi sitere na ụdị ndụ niile ịbịa leta, duzie ma kparịta azụmahịa.